The Medialink router inoonekwa seasina waya router nekuti inopa iyo Wi-Fi yekubatanidza. Ingori waya kana Wi-Fi inongobvumidza kubatanidza maturusi akati wandei semuenzaniso smart materevhizheni, maprinta asina waya, & Wi-Fi inobvumidzwa mafoni.
MediaLink Router Password Matipi:
Sarudza yakaoma uye yakaoma-yekufungidzira passkey yeMediaLink yako kuti iwe unongo rangarira.
Inofanira kunge iri chinhu chakavanzika, semuenzaniso [email inodzivirirwa], zvinoreva kuti haungambotadzi kuzviyeuka.
Iyo vhoriyamu yekuchengeteka inoenderana yakanangana nepasitsiki kuomarara, uye kuedza kunoitwa kuchengetedza iyo passkey ye router yako.
Ipa iyo Passkey yeiyo router iyo yauchayeuka (usability kutanga). Pasina mubvunzo kutaura, iwe unogona kugadzira yakaoma kuvhiringidza passkey ine akasiyana mavara, manhamba, greek plus latin. Nekudaro pakupedzisira iwe unozopedzisira wapinda mairi pane inonamira & woiisa pane iyo router inorova chinangwa.
Alter Default Wifi zita (SSID) & Passkey plus inogonesa Network Encryption
Rimwezve zano diki (sezvo risina zvazvinoita pakuchengetedza), nderekushandura zita reDefault Wifi (SSID) sezvo zvichizonzwisisika kune vamwe kuti vazive network yavari kubatanidza nayo.
Tsvaga - Yepamberi Setting (yakawanikwa mubhokisi remenyu kumusoro kwepeji peji), & pinda pairi
Tsvaga - Wireless Setting (inoonekwa mubhokisi remenyu kumusoro kwepeji peji), & rova ​​pairi
Tsvaga - Basic Wireless Setting (inoonekwa mubhokisi remenyu kumusoro kwepeji peji), uye rova ​​pairi
Tsvaga Network Mazita (SSID), iri izita reWi-Fi reRuta. Mushure mekunyorera zita renetiweki, unofanirwa kubvumidza WPA2-PSK kunyorera pane iyo router. Iyi ndiyo yakaomesesa encryption standard inowanikwa kune epamba network.
Kuisa ichangoburwa WPA Pre-Kugovana Kiyi / WI-Fi Passkey - iyi ndiyo paski iyo yauchazoshandisa kubatanidza kune yakadzika imba Wi-Fi. Gadzira iyo 15-20 mafonti uye usashandise imwechete passkey iyo yawakashandisa yeMediaLink router login.
MediaLink router kupinda mumatambudziko.
MediaLink Passkey Haishande
Mapaseki anowana nzira yekusaita! Kana, muzviitiko zvakawanda, vatengi vanowana nzira yekusazvidzora. Muzviitiko zvese izvi, tarisa kumusoro iyo "Maitiro Ekumisazve iyo MediaLink Router kune Default Setting" chikamu.
Wakanganwa Passkey kuMediaLink Router
Kunyangwe kana kwete kana iwe wachinja default usernames kana mapassword eMediaLink & waakanganwa, ingoona "Maitiro Ekumisazve iyo MediaLink Router Kune Default Kuisa" chikamu.
Dzorerazve iyo Router kune Default Zvirongwa
Sezvo, kuchengetedzwa kwenetiweki kwakakosha, basa rekutanga & rekutanga kushandura iyo MediaLink router Default Login & Passkey kune chimwe chinhu chakachengeteka & chaicho.
Tevedza rairo kuti upinde paMedialink Router.
Batanidza iyo waya waya kune Laptop kana PC. …
Shanyira webhu saiti yekusarudza & nyora IP kero yeMedialink router mubhokisi rekero. …
Tevere nyora mazita evashandisi uye mapassword eiyo router kuti uwane admin admin. Iye zvino watopinda.
Categories muchiso Leave mhinduro
Dhizaina waya isina waya neiyo yakasimba yokufeva AC kana N router. Unosarudza kubatana kwepamhepo kwePC yako here? Hapana nyaya. Nenzira yeEminent routers iwe surly unenge uine yakagadzikana & inokurumidza Internet link.
Eminent mairaira ane akareruka firewall ayo anobatsira mukudzivirira yako epamba-based network fomu isingadiwe kuwana kuburikidza neinternet. Sezvo firewall ichi kudzivirira kubatana kwemukati iwe ungangoda kuvhura chiteshi kuburikidza nayo kune mamwe mashandisirwo & mitambo. Iyi nzira yekuvhura chiteshi inowanzo kuzivikanwa se port kumberi nekuti urikutumira chiteshi thru internet kune yako-based network.
NeEminent Wireless 300N Router iwe unogona kugovera yako mambure ekubatanidza neakanyanya kumhanya kutenderera 300Mbps. Iyi yakasimba Wireless N router padhuze nemairi mairi zvakanyanya inokwidza yako isina waya renji. Ingobatanidza vashandisi vazhinji, wired kana isina waya. Iva nebhenefiti yekumhanyisa mhanyisa, & iyo isinganetsi nzira yekuburitsa kubatana kwako. Nekuda kwekumhanya kwazvo, iyo Wireless Router yakanakira kutamba mitambo yepamhepo & kuyerera mumhanzi & vhidhiyo.
Kune yakagadziriswa network vatengi, zvakanaka kuti unzwisise kuti iyo Eminent Wireless Router ine akati wandei maficha akaomarara. Nyorera WDS & iyo Wireless Bridge inoshanda kuwedzera zviratidzo zvako zvisina waya. Nekuda kweiyo yekumhanyisa processor processor & 'Traffic Kuongorora' yega yega IP, chiteshi kana Protocol, iwe unogona kuona kuti unogona kugara uchitamba kana kusecha internet zvakanyanya.
Kuwedzera SSIDs kunogona kuwedzerwa zvisina simba pamwe nekusiyaniswa kana zvichikosha Izvi zvinokutendera iwe kukurumidza uye nyore nyore kumisikidza yechipiri network kune vashanyi vashanyi. Izvi zvakanakira nzvimbo dzebhizinesi senge hotera kana hotspot, semuenzaniso, kwaunoda kupatsanura vashanyi kubva kune yako bhizinesi network.
Iyo Eminent 300N Wireless Router inogona kutoshandiswa neinowanikwa 54 Mbps & 11 Mbps maturusi. Nezere yakazara & kumhanya kwakatenderedza mazana matatu Mbps, zvinokurudzirwa kuti ushandise isina waya Eminent network zvinongedzo.
Maitiro makuru ekuvhura chiteshi ndeaya:
Gadzira yakatarwa IP kero pane yako PC kana chishandiso chaunoda kutumira chiteshi kwachiri.
Kupinda muiyo Eminent router.
Enda kune chikamu chekupfuudza chiteshi.
Kudzvanya pane Setup Chishandiso switch.
Kushandura pane Advance Setup link.
Kushandura paNAT / Kutumira.
Kudzvanya kuPort Kufambira Mberi.
Gadzira chiteshi chekutungamira chengarava.
Kunyangwe nhanho dzakadai dzichiita senge dzinonetsa pakutanga, ingo pfuura pazasi pematanho eako Eminent router.
Izvo zvakakosha kumisikidza yakatarwa IP kero mune chishandiso icho iwe chaunotumira chiteshi kune. Izvi zvinovimbisa kuti madoko anogara akavhurika kunyangwe chishandiso chatanga zvekare. Paunenge uchimisikidza yakatarwa IP kero pane zvishandiso iwe zvaunoda kuti upinde kune iyo router.
Iye zvino unofanirwa kupinda kune Eminent router. Iyo router ine webhu interface, saka iwe unogona kupinda mairi newebhu browser. Izvi zvinogona kuve chero Google Chrome, Edge, Opera, kana Internet Explorer. Izvo hazviite zvisinei kuti ndeipi browser yaunoda kushandisa. Iyo IP kero ye router yako inogona kana kunzi sePC's default gateway.